Aleo Gatorade toy izay rano tsy ampy rano? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Gatorade vs rano - vahaolana maharitra
Gatorade vs rano - vahaolana maharitra
Aleo Gatorade toy izay rano tsy ampy rano?
Pedialyte syGatoradedia samy natao hanakanana na hitsaboanafahampian-drano. Raha ny marina, noho ny atiny electrolyte dia mandaitra kokoa izy ireonoho ny ranoamin'ny rehydrating.10 Mar 2021
tombony fanomanana sakafo
Hey ry zalahy, anio isika dia hiresaka momba ny tsy fitovian'ny Powerade sy Gatorade. Mandehana any amin'ny fivarotana enta-mavesatra ianao dia hahita lalantsara goavambe feno ireto entana roa ireto, ka tena tsara dia tsara ny marketing. Tsy haiko raha ianao? Fantany fa i Powerade dia manana Coca-Cola Gatorade manana an'i Pepsi Cola ary teny an-dalana, Coca-Cola dia manana Powerade Minute Maid Ehrlich, iray hafa antsoina hoe Odwalla Juice izay tsy haiko ny manonona ilay rano vitamina Sprite voasary tena novidinao tamin'ny làlana ho an'ny $ 4.1 miliara, izay misy siramamy 31 grama, 6 sotrokely ary koa rano voanio Zico, koa inona avy ireo fahasamihafana lehibe? Mety hieritreritra aho fa ratsy kokoa ny siropakà katsaka fruktosa ambony, fa ny tsy filazan'izy ireo anao hoe avy aiza ny sukrosa dia tsy midika hoe mety ho avy ny fary, ary azo inoana fa avy amin'ny siramamy bitika izay misy ny GMO okay ary midika izany fa manana reside glyphosate izy, tsy lazaina intsony fa efa nahare momba ny syrup sy katsaka vita amin'ny katsaka aho ary tena misy residu glyphosate ihany koa, ankehitriny ny sukrosa dia 50% glucose ao anaty sirafitra katsaka fructose fruktosa 50% Sucrose. dia fructose 42% ary glucose glucose 58%, noho izany ny sukrosa dia manana fructose betsaka kokoa ary ny fructose dia miteraka fanoherana insuline kokoa noho ny glucose satria be loatra ny aty ary ny atiny dia mitahiry izany ho fahatsiarovana ary noho ny haavon'ny siramamy ao aminy dia manomboka ny vatana ny fanaovana insuline mba hampivoatra ny roa dia mitovy, fa ny sukrosy dia mety somary ratsy kokoa, okay avy eo manana dextrose izay siramamy a synthetique sy masiran'ny sakafo novaina, ary io dia anarana hafa iray ho an'ny glutamate monosodium, noho izany dia manatsara ny tsirony r tsara kokoa noho ny tena izy dia tsy maninona ireo electrolytes okay manana potasioma sy sodium isika dia manana roa tsy ananantsika rehetra ary manome anao potassium potassium 35 a izy ireo ary hahafantaranao fa mila 4.700 miligramy isan'andro ny vatantsika. ka ampahany kely dia kely dia kely amin'ny zavatra tena ilainao izany.
Powerade manana dimy amby telopolo isika ary i Gatorade dia dimy amby efapolo sodium, manana dimam-polo amby zato milligrams isika ary eto dia manana sodium sy enim-polo amby zato milligrams ary Powerade dia manana zavatra b6 b3 b12 sentetika ary tsy manana vitamina fanampiny i Gatorade, Ka iza no tsara kokoa izay raha ny marina ratsy dia samy ratsy kokoa izy ireo maninona noho ny habetsaky ny siramamy dia misy rano siramamy misy mineraly kely vitsivitsy misy sôdiôma ka raha manandrana mandena tena ianao dia makà zavatra iray amin'ny elektrolita rehetra tsy misy siramamy raha tsy misy ny siramamy miafina raha tsy misy ny malt dextran ary ho tsara lavitra ianao izao, Indraindray dia henonao fa rehefa manao fanatanjahan-tena ianao dia mila manolo ny siramamy izay dorana rehefa miditra ao amin'ny tahirin'ny glycogen anao, fa ny olana dia, raha dia manolo ny tahirin'ny glycogen anao, hajanonao tanteraka ny fahafahan'ny glycogen anao hisintona avy amin'ireo tahirinao matavy, izay mety ho antony iray lehibe mahatonga anao maheno ny Exercise aupt, ka samy tsy hanampy anao very lanja ht, ary azo inoana fa tsy dia manana tanjaka ianao ary mety ho reraka aza satria ny habetsaky ny siramamy nandroranao dia ny insuline siramamy manosika ny siramamy, manana siramamy ambany ianao mandritra ny adiny iray aorian'izay ary raha mila angona bebe kokoa momba ny electrolytes ianao apetaho eto ambany ny rohy iray, zahao izany ary misaotra anao nijery, ka raha tianao ity lahatsoratra ity dia mandrosoa ary zarao amin'ny olona iray fantatrao fa tena afaka mandray soa avy amin'izany izy
Moa ve Gatorade manisa rano?
Ny ranom-boankazo sy zava-pisotro ara-panatanjahantena koa dia mampihena - anaoafakaampidino ny atin'ny siramamy amin'ny alàlan'ny fanalefahana azy ireorano. Kafe sy dite ihany koamanisaamin'ny isao. Betsaka ny taloha no nino fa tsy ampy rano izy ireo, saingy nofoanana io angano io. Ny effets diureticnotsy offset hydration.9 Sep 2011
♪ Bob sy Brad izy roa malaza indrindra ♪♪ Physiotherapists ♪♪ amin'ny Internet ♪ - Salama ry olona, ​​izaho Bob Schrupp, Physiotherapist - Brad Heineck, Physiotherapist - Ity izahay, Physiotherapist malaza indrindra amin'ny Internet - Araka ny hevitray, mazava ho azy, Bob - Mahagaga! Ny tokony ho fantatry ny rehetra momba ny rano sy zava-pisotro ankafizin'ny fanatanjahan-tena. Nahita anao nihemotra kely aho, Brad. - Ie. - Ka manana vaovao eto izahay fa tsy raharahako na olon-tsotra ianao, tsy maintsy fantatrao izay sotroinao ary maninona ianao indraindray mila fanampiana kely amin'ny fisotroanao mihazakazaka marathon tapany na inona - afaka izany Mitovy ihany - mandalo zava-pisotro ara-panatanjahantena malaza sy zava-pisotro mahazatra izay mila fantatrao momba ny fampahalalana momba anao ianao - Marina izany, Bob.
Raha izany, raha vaovao amin'ny fantsonao ianao, azafady maka segondra kely hisoratra anarana aminay. Manolotra lahatsoratra momba ny fomba hijanonana ho salama, ho salama ary tsy hisy fanaintainana, ary mampakatra isan'andro izahay te-hitsidika anay amin'ny fantsona media sosialy sy ny tranonkalantsika - eny - bobandbrad.com, satria manome zavatra foana izahay.
Hanao, anio tsy misy na inona na inona, fa manomboka rahampitso, raha asabotsy ianao, dieny izao. Raha mijery an'io aorian'ny asabotsy ianao dia tokony ho salama tsara, tokony hisy ny fanomezana. Na izany na tsy izany, mankanesa any amin'ny bobandbrad .com ary mankanesa any amin'ny fizarana fanomezana, dia holazainy aminao izay omenay. - Azafady, azafady. - Manome haavon'ny birao izahay, milay tokoa. - Oh, ho an'ny toeram-piasana solosaina. - Eny, herinaratra, herinaratra io, tena milay. - Eny, tsara. - Raha tsy izany ianao dia mankany amin'ny BobandBrad amin'ny Facebook.
Mipetaka eo an-tampon'ilay pejy izy io. Te hanana kinova fohy kokoa anay ianao, rehefa reraky ny miresaka izahay, mandehana any amin'ny Twitter ary mankany amin'i Bob ny Instagram. - Manana kinova 60 faharoa momba anay aho. - Asa tsara Bob, mangetaheta be indray aho ry Bob - Eny, afaka mivoaka izao ianareo, miraraka ny saka sy ny alika. - Ie, tsy vazivazy.
Na izany na tsy izany, Bob, iray herinandro lasa izay dia nampakatra lahatsoratra iray momba izay tokony hosotroinao izahay. Zava-pisotro sotroina ve ny rano rehefa mazoto sy misasatra, manao fanatanjahan-tena, mihazakazaka, na inona na inona. - Azo antoka. - Ka nieritreritra aho fa hanao fikarohana, nataoko, ary nidina tany aminy ny zava-dehibe indrindra, rehefa avo ny hetsika ataonao, mifoka ianao, mila manana izany ve ianao? Sodium - Mila mameno ny sodium ianao - Marina, marina.
Ka ny rano mihitsy no tsara, fa ny manampy sodium, ary koa ny electrolytes hafa dia zava-dehibe ihany koa, fa ny sodium kosa no voalohany - ary mety ho lohalaharana amin'izany aho satria raha manao izany aho, dia iza aho, be hatsembohana, ka raha Manao hetsika be dia be aho, mandritra ny adiny telo eo ho eo, - Midika izany fa mihalasa hafahafa aho, midika izany, mahazo kely aho - Eny, hafahafa ihany ianao na izany aza - hafahafa aho, hafahafa ihany nefa ampio izay, na olon-tsy fantatrao aza.- Ny vadinao angamba tsy mahazaka anao.- Marina izany, ka tsy maintsy misotro ny sasany aho ary hasehoko anao izay sotroiko.- Azo antoka.- Ary misy ny tsy fitovizany.- Azo antoka. - Mahatonga ahy hitondra azy eto fotsiny izany? - Ie, ampidiro izy.
Noho izany dia manana zava-pisotro malaza be izay ho tsikaritray, ny sasany mety tsy tsikaritrareo, ary eto izahay. Manana rano eto isika, ary avy eo manana zava-pisotro tsy dia malaza loatra eto, Gatorade, inona no ananantsika, Powerade, zahao ity, Bodyarmor, jereo ity, toa kaontenera mahafinaritra, ary avy eo manana ny hafa tafalatsaka fantatro izy ireo Tsy dia salama tokoa ny misotro Pepsi sy Cola - Marina, azafady, Pepsi sy Cola, fa izany no izy. - Ie, ka aleo esorina tsy ho diso izany, satria manana latabatra tokoa isika.
Ny nataoko, Bob, nataoko ny matematika satria samy hafa ny habetsaky ny volume - eny, marina - noho izany dia mamitaka kely fotsiny. Raha mijery an'io ianao dia milaza ny habetsaky ny gramo na siramamy ao anatiny, fa ny siramamy dia 8 grama fotsiny ary manana kaontenera 28 grama isika.- Oh, azo antoka.- Ka mamitaka izany.- Eny mieritreritra ianao fa tsy izany. siramamy betsaka, fa ho hitantsika ny marina.- Ie, tena marina.- Tonga any amin'ny farany ambany isika.- Any ianao no mandeha. - Toy ny mpitsongo dia izahay.- Ka eto izahay no misotro.
Nahazo ny cola sy pepsi anay izahay, karazana tsy dia tsara loatra, ary azonay ny lakilasy, ny rano, ary avy eo ny zava-pisotro dimy hafa - miorina indray amin'ny ony 16 - 16 grama, tena marina. - Okay, azo antoka. - Manana ny siramamy sy ny kaloria ary ny sodium izahay.
Aza adino fa zava-dehibe ny sodium, mila ampidirinao ao amin'ny vatanao izany rehefa hatsembohana ianao. - Tena mahaliana izany, afaka misotro Pepsiand Cola ianao ary maka sodium betsaka - Mety tsy ampy - Mety tsy ampy - Nefa jereo izany, ny Bodyarmor dia tsy manana sodium firy toa an'i Pepsi sy Cola, - Eny, somary hafahafa izany - ity tokoa, tsy mifanaraka amin'ny sokajy fisotroana fanatanjahan-tena. Marina fa misy rano voanio sy electrolytes hafa izay mahasalama, nefa indray, ny sodium dia manakiana Video hatramin'ny herinandro lasa izay - Marina, talohan'izay - Eny, ka andao hijery ny haavon'ny siramamy.
Pepsi sy Cola dia mitovy amin'ny 55, 52, fiadiana amin'ny vatana, 36 grama - siramamy betsaka azo raisina amin'ny zava-pisotro ara-panatanjahantena, na andao lazaina fa ampiasainao fotsiny izany mba hiasa any ivelany, tiako holazaina ary Te handray ianao electrolytes, mandray siramamy be dia be ianao - Tsy mila izany siramamy betsaka izany ianao - Tsy mila an'io siramamy io ianao, tsy mila izany mihintsy ianao - Ka karazana Bodyarmor no napetrako tao amin'ny sokajy Pepsi sy Cola. Tsy manana izany betsaka izany, saingy tsy manana sodium firy izy io ka tena tsy mifanaraka amin'ilay sokajy - Heveriko fa tokony handray marika isika ary handeha toy izao - Ie, ity fiarahamonina mahantra izay tsy tian'izy ireo ity antsika. Ahoana ny momba an'i Powerade sy Gatorade, ambany ny siramamy ao aminy, noho izany tsara kokoa izany, ary ny kaloria dia mifandray hatrany amin'ny siramamy - Azo antoka.
Ka tsy handany fotoana be amin'izany aho, fa azonao atao ny manamarina an'izany, ary ny sodium dia lehibe kokoa, araka ny hitanao, 200, 211 miligramy, noho izany --- fa tsy dia tsara loatra ho an'ny Izaho mbola - Tsy izany ve .- Ny tiako holazaina dia maninona ianao no mandray an'io siramamy io rehefa 'manandrana salama indray ary fantatrao ve ny tiako holazaina? - Tena marina .- Tsy ilainao fotsiny izany .- Ka, tsara kokoa ny naotin'izy ireo, saingy mbola betsaka ny siramamy.- Mbola haka X iray aho ary hiampita azy .- Eny, andao hanao izany.
Izao dia tsy maintsy milaza zavatra iray aho.- Handeha marika aho.- Nientanentana i Bob eto.- Mitohy ny kabary.- Ka, Powerade sy Gatorade dia manana kinova tsy misy siramamy, Bob.- Eny, oh marina izany .- Fa tsy maintsy nolazaiko izany satria 'tsy maintsy ekeko aminao izany.- Azo antoka.- Saingy tsy haiko raha betsaka ny olona misotro azy.
inona ny fihazakazahana cannonball
Nisotro azy aho, tsy dia tsara loatra. Mamela tsindrin-tsakafo aorian'ny vavako.- Ny endrika fisakafoanana? - Ie, na inona na inona.- Pep, tsy misy siramamy, endrika io.- Eny, ny Gatorade tsy misy siramamy no azoko, tsy ratsy izany. - Ka vitantsika izany niampita, niampitantsika ny iray, tena namaky an'ity isika.
Fanontaniana maro kokoa ireo, sa tsy izany? - Ie. - Saingy mety mbola miampita azy ireo aho, ny tiako holazaina dia ireto: - Eny, raha tiantsika ny tsara indrindra, dia horoahintsika izy ireo. - Eny.- Ankehitriny andao mankany amin'ireo vitsivitsy tsy dia fahita firy ary ity dia iray, tonga izy anaty fonosana.
Tsy maintsy afangaroinao amin'ny rano, fonosana kely eto, ary antsoina hoe Liquid IV izy, tsara tarehy --- tsy manohana an'izany rehetra izany izahay. Midika izany fa tsy manana fifanarahana amin'ireo orinasa ireo izahay - tsia - tsy misy mihitsy - na inona na inona, navelantsika hivoaka fotsiny - ka ny Liquid IV dia manana siramamy 11 grama, izay tena tsara lavitra noho ny ambiny amin'izy ireo Kaloria dia 50 no, tsara kokoa, ary jereo ny sodium amin'ny 500 milligrams, mihoatra ny zavatra hafa rehetra izy io. - Ka raha mijery ny sodiumanao ianao ary maniry zavatra nefa tsy maniry be loatra, ny Liquid IV dia mety hoe 'Tsy ho anao - Mety ho be loatra - Eny, mety be loatra - Raha tsy manana olana amin'ny fihinanana sodium ianao ary manao fampiofanana mahery setra, mety ho tsara kokoa aminao izany, na dia ho hitantsika vetivety aza, dia izany, - Eny.- Ary izany no mety aminao, marina? - Eny, nampiasa izany aho ary nanoro hevitra ny dokotera.- ary ao anaty kaontenera kely mahafatifaty toy izany.- eny kaontenera kely ary raisiko fotsiny ilay takelaka ary ny ataoko dia ataoko ao anaty tavoahangy rano mahazatra sy apetraho ao izy dia miboiboika ary miempo- Ary miempo.- Eny, tsy mihinana ilay takelaka fotsiny ianao? - Nanao izany ianao indray andro, hitako izany.- Eny, mahafinaritra izany, miboiboika ao am-bavanao io.- Eny, miboiboika ao am-bavanao - izany no fanaovan'izy ireo vatomamy.
Tiako ny tsiro ary hampiasaiko amin'ny golf satria mandehandeha aho rehefa milalao golf ary toa manome tosika kely ahy koa io, angamba ara-tsaina daholo izany .- Eny, iza no mahalala .- Eny, fa ny tiako holazaina dia mahita ny izany, siramamy iray grama, - marina - kaloria 15 fotsiny, ary toa sira izany ho ahy - marina, 360 milligrams - sy ny electrolytes sy ny toa ahy, izany no valiny, ary ampitahainay amin'ny rano ny rano, izay rano tsara, fa ny rano tsy manome anao electrolytes ary tsy manome sira anao. - Marina izany, ka raha be hatsembohana ianao, dia azo antoka fa rano tsara ny fisotroana rano, fa ny dingana manaraka no ataonao - ary izany no olana dia nisotro rano fotsiny aho ary manasa anao, manadio ny electrolytes anao ary ianao aza voky, avy eo tampoka ianao dia - manina na misavoritaka - eny, izaho izany. - Ary te-hanome hevitra iray eto aho satria nanokana fotoana hahitana hoe ohatrinona ny siramamy ao anatin'io tavoahangin'ny Bodyarmor io. - Avy amin'ny Bodyarmor.- Ary izay ihany, 72 grama.- Jereo izany, siramamy betsaka izany.- Eny, mba haka rano fotsiny ianao, raiso ny siramamy, mihinana ny siramamy, sasao.- sira kely Ao anatiny.- Eny, avy eo dia hitovy ihany, saingy mora vidy.- Eny, tsy tian'ny bodyarmor isika.- Tsy tianay izahay.- Nefa vinavina fotsiny, tsara izany satria eto izahay ianao.- Izay - Marina izany.- Tsy eto amin'ny marika izahay.- Ka tohizo, ankehitriny notezaina ianao, jereo izay sotroinao, fantatrao izao izay tokony ho fantatrao, ary eto izy roa, heveriko fa hifidy ny iray amin'ireny ve aho, indrindra omaly, roa andro lasa izay, nandeha bisikileta aho ary mafana sy mando.
Niakatra be ny hamandoana ary hitako izany. Nitsoka ahy fotsiny izy io .- Azo antoka, eny.- Ary rano fotsiny no nisotroako, tsy nanana afangaro aho.- Eny, tiako hojerena raha tsara kokoa ianao na dia tsy misy izany aza, mahazo ny soritr'aretina aho, saingy mahatsapa tsara kokoa aho rehefa Ataoko fa toy ny fisakafoanana izany rehefa any ivelany aho, tsy ny eritreritro fotsiny izany - heveriko fa ny olona izay manao hetsika lavitra be dia be dia manamarina izany - Eny. - Tena izany, fantatrao, toa an'i Ironman, matetika, ireto zavatra ireto izay maharitra ora maro.- Eny, raha manao Ironman ianao dia avelao etsy ambany ny hevitrao.
Te-hihaino izay holazainao aho.- Hitranga ny asabotsy izao i Wisconsin Ironman. - Oh, tena izy ve? - Eny, hetsika lehibe, misy olona 2.000 no hanao an'io --- Aiza no anaovana azy? - Madison, Wisconsin, sa tsy nolazaiko izany? - Tsia, hoy ianao i Wisconsin - Oh, Wisconsin, eny Madison - Tsara izany, misaotra ny rehetra nijery - Vakio ny Rambo amin'ny lalana hafa.
Tokony hisotro zava-pisotro fanatanjahan-tena ve ianao fa tsy rano?
Azoko soloina Gatorade ve ny rano?
Ny tolo-kevitra dia ny olon-dehibe sy ankizytokonymanana ihanyzava-pisotro ara-panatanjahantenamandritra ny fanatanjahan-tena maharitra sy mavesatra maharitra maharitra adiny iray. “Rano,ranoSYrano tokonyho ilayzava-pisotrosafidy amin'ny hydration alohan'ny, mandritra ary aorian'ny fampihetseham-batana na fanazaran-tena maharitra latsaky nyirayora, 'hoy ny Dr. Nish.10 Aogositra 2017
Mahatonga tsy fahampian-drano ve i Gatorade?
Amin'ity tranga mampivadi-po ity dia misy tobim-pitsaboana sasany mampiasa zava-pisotro ara-panatanjahantena ho vahaolana rehydration. Saingy, atahorana hisy ny risika amin'ny fahasalamana. “Ny tsy fahampiana fototra amin'ny zava-pisotro toy nyGatoradeho an'ny aretina mifandraika amin'ny aretinafahampian-dranodia hoe be loatra ny siramamy ary tsy ampy sira (sodium) na potasioma », hoy i John D.29 Jan. Oktobra 2018
Tokony hisotro an'i Gatorade ve ireo be taona?
Fitsaboana ny tsy fahampiana rano kely
Aleo nyzokiolonaolonatokonyraiso ny tsiranoka misy electrolytes toaGatorade(na fanatanjahan-tena hafazava-pisotro), ranom-boankazo na bullion. Mazava ho azy fa manampy koa ny rano.11 des 2017
Fa maninona no tsy tsara aminao i Gatorade?
Rehefa lany matetika, ny atin'ny siramamy an'nyGatoradeafaka mandray anjara amin'ny fahasimban'ny nify koa, indrindra amin'ny ankizy. Ho an'ireo olona tsy miasa intsony, mahazo siramamy sy sodium fanampiny mandritra ny androtsiailaina na atolotra. Ny kaloria fanampiny avy amin'ny zava-pisotro fanatanjahantena dia mety handray anjara amin'ny fitomboan'ny lanjany.
Aleo Powerade noho Gatorade?
Powerademanana vitamina bebe kokoanoho i Gatorade
Samy tsy misy tavy na proteinina. Na izany aza,Gatorademisy kaloria 10 fanampiny ary sômazy kely kokoanoho i Poweradeisaky ny fanompoana. Etsy ankilany,Poweradefonosana micronutrients betsaka kokoa, ao anatin'izany ny magnesium, niacin, ary ny vitamina B6 sy B12, izay mitana andraikitra lehibe amin'ny vatanao.20 Sep 2019
Ratsy ho an'ny voa ve ny Gatorade?
Ho fanampin'izany,GatoradeMety hisy fiatraikany ratsy amin'nyvoa. Misy sodium ampiana amin'ireo zava-pisotro ara-panatanjahantena ireo izay tsy maintsy mamakivaky nyvoaalohan'ny hamoahana azy ireo amin'ny rano sisa. Rehefa manana sodium be loatra ny vatana dia nyvoatsy maintsy mifoka sy manodina, mamoaka calcium ny vatana.
Ratsy ve ny Gatorade amin'ny voa?
Iza no tsara hosotroina, rano sa Gatorade?
Raha manampy anao hahazo ny habetsaky ny tsiranoka ilainao ny Gatorade isan'andro, dia aza lavina fa hydration ny tenanao. Azonao atao ny misotro zava-pisotro fanatanjahan-tena ambany na aotra-kaloria raha tsy manao fanatanjahan-tena matetika ianao, mba hisorohana ny siramamy sy ny sodium ampiana.
Inona no mahasamihafa an'i Gatorade sy Powerade?
Matetika izy ireo dia misy gliosida amin'ny endrika siramamy, ary koa mineraly sy electrolytes ary indraindray vitamina, proteinina, na kafeinina. Misy safidy fantatry ny maro, toa ny Powerade sy Gatorade, miampy ireo mpifaninana tsy dia malaza loatra.
Ahoana no anampian'i Gatorade ny vatana hitazona tsiranoka?
Ny sodium ao Gatorade (maha-tia rano) dia manampy koa ny vatana hitazona tsiranoka. Izy io koa dia manana gliosida betsaka kokoa izay miasa ho loharanon'ny angovo. Ireo gliosida ireo dia tompon'andraikitra amin'ny famenoana glycogen rehefa reraka.